Apple ndiyo zvakare yakanyanya kukosha mhando munyika | IPhone nhau
Kunyangwe kukura kunoshamisa kweApple kwakasangana mumakore achangopfuura, Amazon yakatonga chinzvimbo chemakambani akakosha kwazvo kutenderera pasirese, chinzvimbo icho Cupertino vakomana vakangobvutirwa kubva kwaari, sekureva kweBrand Finance. Kekupedzisira Apple payakakwenya chinzvimbo ichi yaive makore mashanu apfuura.
Brand Finance kubvunzurudza na brand kukoshesa kutenderera pasirese. Iyo inovaka chinzvimbo ichi zvichibva pane zvinoverengeka zvezvinhu senge mhando yechiratidzo, simba rechiratidzo, uye mimwe mibvunzo yakaoma kunzwisisa senge imarii iyo zita raizobhadharisa copyright kana ikaburitsa zita rayo.
Sekureva kwa CEO weBrand Finance Americas Laurence Newell
Iyo Steve Jobs nhaka inoramba ichiyerera kuburikidza neApple, ine hunyanzvi hwakavakirwa muiyo mhando yeDNA. Sezvo Apple ichidzorera zita rechiratidzo chakakosha kwazvo pasi rose kubva kuAmazon, makore mashanu kubva payakapedzisira kubata nzvimbo yepamusoro, tiri kuzvipupurira tichifunga zvakasiyana zvakare. Kubva paMac kuenda kuPod, iPhone, iPad, Apple Watch uye nekunyorera masevhisi, kusvika kusingaperi uye nekunze.
Iyo rondedzero yemakambani akakosha anotungamirwa neApple uye inoteverwa neAmazon. Panzvimbo yechitatu tinowana Google, uyo akadonha chinzvimbo chimwe, achiteverwa na Microsoft inoramba iri pachinzvimbo chechina uye Samsung, uyo anobatawo chinzvimbo chechishanu sechinhu chakakosha kwazvo pasi rose.
Si isu tinofananidza brand equity nemusika capitalization, Apple inosvika 2.4 trillion dollars, Microsoft 1.8 trillion, Amazon 1,6 trillion dollars neGoogle 1,26 trillion dollars.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti zvinoenderana nekambani iyi Apple ndiyo inonyanya kukosha, uye zvingangoita kuti mumavhiki anotevera ivo vachaburitswa zvidzidzo zvitsva zvichisimbisa iyo imwechete data kana kuti vanoisa Amazon sekambani inonyanya kukosha mumusika, kubvira mugore ra2020, yave iri kambani yakura zvakanyanya nezvikonzero zvatinoziva tese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple ndiyo zvakare yakanyanya kukosha mhando munyika